iPhone 12 Series မှာ ဘယျသူတှကေ ဘယျ Model ကိုဝယျယူသငျ့သလဲ? |
အခုပွောပွပေးသှားမှာကတော့ iPhone 12 ဝယျမယျ့လူတှအေနနေဲ့ Mini, 12, Pro, Pro Max ၄ မြိုးထဲကမှ ဘယျသူတှကေ ဘယျ Model ကို ရှေးခယျြသငျ့လဲဆိုတာပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ
iPhone 12 Mini ရဲ့ Specs တှကေိုအားလုံးပဲသိပွီးကွမှာပါ .. Specs တျောတျောမြားမြားက iPhone 12 Pro နဲ့တျောတျောတူပါတယျ .. ကှာတာဆိုလို့ RAM, Battery, Display Brightness, Build Quality လောကျပဲကှာတာပါ ..
iPhone 12 Mini ရဲ့ Battery က 2,227 mAh ပဲပါ,ပါတယျ .. တျောတျောလေးကိုသေးတာပါ .. သေးဆို သူ့ရဲ့ Body Size ကလဲသေးတာကိုး .. iPhone 6, 6s, 7, 8 တို့ထကျတောငျ နညျးနညျးပိုသေးပါတယျ .. Battery Life ကတော့ iPhone XR ထကျအနညျးငယျပိုနညျးမှာဖွဈပွီး iPhone SE (2020) ထကျတော့ပိုကောငျးမှာပါ ..
iPhone 12 Mini ကိုဘယျလိုလူတှကေဝယျသငျ့လဲဆိုတော့ Compact ဖုနျးကွိုကျတဲ့လူတှဝေယျသငျ့ပါတယျ .. လကျထဲကိုငျရတာ သေးသေးကဈြကဈြရှိလှပွီး လကျတဖကျတညျးနဲ့ ဖုနျးတလုံး,လုံးကိုစိတျကွိုကျသုံးလို့ရတဲ့အနအေထားပါ .. Game ဆော့မယျဆိုတဲ့လူတှအေနနေဲ့ကတော့ iPhone 12 Mini ကိုယောငျလို့တောငျမစဥျးစားသငျ့ပါဘူး .. Screen Size က 5.4” ရှိလို့ သေးလှနျးတဲ့အနအေထားတော့မဟုတျပမေယျ့ Game ဆော့မယျဆို Battery မခံလောကျတဲ့အနအေထားမို့လို့ပါ .. ဒါကွောငျ့ Compact ဖွဈတာကွိုကျတယျ, Game လဲမဆော့ဘူးဆိုရငျ iPhone 12 Mini ကိုရှေးသငျ့ပါတယျ
iPhone 12 Lineup ထဲမှာ Price to Value အကောငျးဆုံးဖုနျးလို့ပွောရငျ ကြှနျတျောလှနျမယျမထငျဘူး .. iPhone 12 Mini နဲ့ Specs တှအေကုနျတူတူပဲ .. ဒါပမေယျ့သူက Battery 2,815 mAh ပါတယျ .. Battery Life အနနေဲ့ iPhone 11 နဲ့ Battery Life တူတူပဲလို့ Apple ကပွောထားပမေယျ့ iPhone 11 က 1 နာရီလောကျပိုခံပါတယျ ..
iPhone 12 ဟာမနှဈက iPhone 11 နဲ့ယှဥျရငျ တိုးတကျလာတဲ့အပိုငျးတှအေမြားကွီးရှိလာခဲ့ပွီး လူတျောတျောမြားမြားအနနေဲ့ဝယျသငျ့တဲ့ဖုနျးတလုံးပါပဲ .. ခုမှ Android ကနေ iPhone ကိုပွောငျးကိုငျမယျ့လူတှေ, Phone 6, 7, 8, X, Xs Series ကနေ Upgrade လုပျမယျ့လူတှအေနနေဲ့ iPhone 12 ဟာ အရှေးခယျြသငျ့ဆုံးဖုနျးတလုံးပါ .. ပွောရမယျဆိုရငျဗြာ iPhone 12 Pro ဝယျမယျ့လူတှအေနနေဲ့တောငျ 12 Pro အစား iPhone 12 ကိုရှေးဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ .. ဘာလို့လဲဆိုတာ အောကျမှာဆကျကွညျ့လိုကျရအောငျ
Apple ကထုတျလိုကျတဲ့ iPhone 12 Lineup ထဲမှာ ကမောကျကမအနိုငျဆုံးဖုနျးလို့မွငျပါတယျ .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone 12 Pro ဟာ iPhone 12 နဲ့တူတဲ့အခကျြတှတေျောတျောမြားပါတယျ .. ကှာတာဆိုလို့ အောကျမှာပွောထားတဲ့အခကျြတှပေဲကှာတာပါ
– RAM 6GB Vs 4GB
– Stainless Steel Vs Aluminum
– 800 nits Vs 625 nits
– HDR Video 4K @ 60fps Vs 4K @ 30fps
– Tele Lens Vs No-Tele Lens
– LiDAR VS No-LiDAR
ကှာခွားခကျြကဘာမှမပွောပလောကျပါဘူး .. 12 Pro က 12 ထကျ မွငျသာမှုရှိတဲ့ ပိုကောငျးတဲ့နရောဆိုလို့ Camera ပဲရှိပါတယျ .. ဒါတောငျအကောငျးဆုံးမဟုတျပါဘူး .. 12 Pro ထကျ 12 Pro Max က Camera ပိုကောငျးပါတယျ .. အဲ့တော့ Camera ကောငျးတာလိုခငျြရငျ 12 Pro Max ကိုဝယျရုံပါပဲ .. 12 Pro ဟာ 12 နဲ့ Main Sensor ကအစ တခွား Camera Sensor တှပေါတူတူပါပဲ ..
ဒါကွောငျ့ရိုကျလိုကျတဲ့ပုံတိုငျးကတူတူဖွဈနမှောပါ .. ကှာတဲ့နရောကတော့ 12 Pro ဟာ LiDAR Scanner ပါသှားလို့ Portrait ကို Night Mode နဲ့ရိုကျလို့ရသှားတာတှေ, RAM 6GB ပါလာလို့ Apple ProRAW အသုံးပွုလို့ရတာတှပေဲဖွဈပါတယျ .. ဒီတော့ iPhone 12 Pro ကိုဘယျသူတှကေဝယျသငျ့လဲ? ..
iPhone 12 Pro ရဲ့ အရောငျနဲ့ Matte Glass ကိုကွိုကျပမေယျ့ 12 Pro Max လောကျ Size ကွီးလောကျမကိုငျခငျြတဲ့လူတှေ, Pro Max လောကျ Size ကွီးတာမကိုငျခငျြပဲ Night Mode Portrait ရိုကျခငျြတဲ့လူတှအေနနေဲ့ပဲဝယျသငျ့ပါတယျ .. ဆိုတော့ကား 12 Pro အစား 12 ကိုဘာကွောငျ့ ပိုဝယျသငျ့လဲဆိုတာသိသှားလောကျပါပွီ
အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံးကိုမှလိုခငျြပါတယျဆိုတဲ့လူတှအေနနေဲ့ဝယျသငျ့ပါတယျ .. Size ကွီးကိုဂရုမစိုကျဘူး Quality ပိုကောငျးဖို့လိုတယျဆိုတဲ့လူတှအေနနေဲ့ ဝယျသငျ့တာပါ .. iPhone 12 Pro Max ရဲ့ Main Sensor ဟာ iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro တို့နဲ့မတူတော့ပဲ Sensor အသဈကိုသုံးပေးထားပါတယျ ..
အဆိုပါ Sensor အသဈဟာ iPhone 11 Pro Max ထကျ အလငျးဝငျရောကျမှုအား 87% ပိုကောငျးမှာဖွဈလို့ ညဖကျတှရေိုကျရငျ ရှယျကွီးဖွဈနမှောပါ .. ဒီကွားထဲ Sensor ကွီးတခုလုံးကို Stabalise လုပျပေးတဲ့ Sensor-Shift Stabalisation နညျးပညာကွောငျ့ Video တှရေိုကျကူးရာမှာ Stabalisation တျောတျောကောငျးမှနျလာမှာဖွဈပွီး Night Mode ရိုကျရငျလဲ လကျမငွိမျရငျတောငျ ပုံကောငျးကောငျးတှထှေကျလာမှာပါ ..
ဒါ့အပွငျ Zoom ဟာလဲ 12 Pro လို 2x Zoom မဟုတျပဲ 2.5x Zoom ဖွဈသှားပါတယျ .. Battery ကတော့ 3,687 mAh ပါဝငျလာမှာဖွဈလို့ Battery Life လဲတျောတျောကောငျးမယျ့ ဖုနျးတလုံးဖွဈပါတယျ .. ဒီတော့ iPhone 12 Pro Max ကိုဝယျသငျ့တဲ့လူတှဟော အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့အရာတှကေိုပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့လူတှအေနနေဲ့ ဝယျသငျ့တာဖွဈပါတယျ
Admin အနနေဲ့ အကွိုကျဆုံး2လုံးကိုရှေးရမယျဆိုရငျ iPhone 12 နဲ့ iPhone 12 Pro Max ပဲဖွဈပါတယျ .. နောကျဆုံးအနနေဲ့ပွောခငျြတာကတော့ ပိုကျဆံရှိရငျဘယျသူ့မှဂရုမစိုကျပဲ iPhone 12 Pro Max သာဝယျခလြိုကျပါ
iPhone တှဝေယျမယျဆိုရငျ မွနျမာ Region ဝငျတာဝယျဖို့အရေးကွီးပါတယျ .. ဘာလို့အရေးကွီးလဲဆိုတာဒီပို့ဈမှာဖတျနိုငျပါတယျ – https://www.facebook.com/103767734345211/posts/423230195732295/
အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ iPhone 12 ဝယ်မယ့်လူတွေအနေနဲ့ Mini, 12, Pro, Pro Max ၄ မျိုးထဲကမှ ဘယ်သူတွေက ဘယ် Model ကို ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
iPhone 12 Mini ရဲ့ Specs တွေကိုအားလုံးပဲသိပြီးကြမှာပါ .. Specs တော်တော်များများက iPhone 12 Pro နဲ့တော်တော်တူပါတယ် .. ကွာတာဆိုလို့ RAM, Battery, Display Brightness, Build Quality လောက်ပဲကွာတာပါ ..
iPhone 12 Mini ရဲ့ Battery က 2,227 mAh ပဲပါ,ပါတယ် .. တော်တော်လေးကိုသေးတာပါ .. သေးဆို သူ့ရဲ့ Body Size ကလဲသေးတာကိုး .. iPhone 6, 6s, 7, 8 တို့ထက်တောင် နည်းနည်းပိုသေးပါတယ် .. Battery Life ကတော့ iPhone XR ထက်အနည်းငယ်ပိုနည်းမှာဖြစ်ပြီး iPhone SE (2020) ထက်တော့ပိုကောင်းမှာပါ ..
iPhone 12 Mini ကိုဘယ်လိုလူတွေကဝယ်သင့်လဲဆိုတော့ Compact ဖုန်းကြိုက်တဲ့လူတွေဝယ်သင့်ပါတယ် .. လက်ထဲကိုင်ရတာ သေးသေးကျစ်ကျစ်ရှိလှပြီး လက်တဖက်တည်းနဲ့ ဖုန်းတလုံး,လုံးကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားပါ .. Game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ iPhone 12 Mini ကိုယောင်လို့တောင်မစဉ်းစားသင့်ပါဘူး .. Screen Size က 5.4” ရှိလို့ သေးလွန်းတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမယ့် Game ဆော့မယ်ဆို Battery မခံလောက်တဲ့အနေအထားမို့လို့ပါ .. ဒါကြောင့် Compact ဖြစ်တာကြိုက်တယ်, Game လဲမဆော့ဘူးဆိုရင် iPhone 12 Mini ကိုရွေးသင့်ပါတယ်
iPhone 12 Lineup ထဲမှာ Price to Value အကောင်းဆုံးဖုန်းလို့ပြောရင် ကျွန်တော်လွန်မယ်မထင်ဘူး .. iPhone 12 Mini နဲ့ Specs တွေအကုန်တူတူပဲ .. ဒါပေမယ့်သူက Battery 2,815 mAh ပါတယ် .. Battery Life အနေနဲ့ iPhone 11 နဲ့ Battery Life တူတူပဲလို့ Apple ကပြောထားပေမယ့် iPhone 11 က 1 နာရီလောက်ပိုခံပါတယ် ..
iPhone 12 ဟာမနှစ်က iPhone 11 နဲ့ယှဉ်ရင် တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိလာခဲ့ပြီး လူတော်တော်များများအနေနဲ့ဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတလုံးပါပဲ .. ခုမှ Android ကနေ iPhone ကိုပြောင်းကိုင်မယ့်လူတွေ, Phone 6, 7, 8, X, Xs Series ကနေ Upgrade လုပ်မယ့်လူတွေအနေနဲ့ iPhone 12 ဟာ အရွေးချယ်သင့်ဆုံးဖုန်းတလုံးပါ .. ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာ iPhone 12 Pro ဝယ်မယ့်လူတွေအနေနဲ့တောင် 12 Pro အစား iPhone 12 ကိုရွေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် .. ဘာလို့လဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
Apple ကထုတ်လိုက်တဲ့ iPhone 12 Lineup ထဲမှာ ကမောက်ကမအနိုင်ဆုံးဖုန်းလို့မြင်ပါတယ် .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone 12 Pro ဟာ iPhone 12 နဲ့တူတဲ့အချက်တွေတော်တော်များပါတယ် .. ကွာတာဆိုလို့ အောက်မှာပြောထားတဲ့အချက်တွေပဲကွာတာပါ
ကွာခြားချက်ကဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး .. 12 Pro က 12 ထက် မြင်သာမှုရှိတဲ့ ပိုကောင်းတဲ့နေရာဆိုလို့ Camera ပဲရှိပါတယ် .. ဒါတောင်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး .. 12 Pro ထက် 12 Pro Max က Camera ပိုကောင်းပါတယ် .. အဲ့တော့ Camera ကောင်းတာလိုချင်ရင် 12 Pro Max ကိုဝယ်ရုံပါပဲ .. 12 Pro ဟာ 12 နဲ့ Main Sensor ကအစ တခြား Camera Sensor တွေပါတူတူပါပဲ ..
ဒါကြောင့်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကတူတူဖြစ်နေမှာပါ .. ကွာတဲ့နေရာကတော့ 12 Pro ဟာ LiDAR Scanner ပါသွားလို့ Portrait ကို Night Mode နဲ့ရိုက်လို့ရသွားတာတွေ, RAM 6GB ပါလာလို့ Apple ProRAW အသုံးပြုလို့ရတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဒီတော့ iPhone 12 Pro ကိုဘယ်သူတွေကဝယ်သင့်လဲ? ..
iPhone 12 Pro ရဲ့ အရောင်နဲ့ Matte Glass ကိုကြိုက်ပေမယ့် 12 Pro Max လောက် Size ကြီးလောက်မကိုင်ချင်တဲ့လူတွေ, Pro Max လောက် Size ကြီးတာမကိုင်ချင်ပဲ Night Mode Portrait ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပဲဝယ်သင့်ပါတယ် .. ဆိုတော့ကား 12 Pro အစား 12 ကိုဘာကြောင့် ပိုဝယ်သင့်လဲဆိုတာသိသွားလောက်ပါပြီ
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးကိုမှလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဝယ်သင့်ပါတယ် .. Size ကြီးကိုဂရုမစိုက်ဘူး Quality ပိုကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဝယ်သင့်တာပါ .. iPhone 12 Pro Max ရဲ့ Main Sensor ဟာ iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro တို့နဲ့မတူတော့ပဲ Sensor အသစ်ကိုသုံးပေးထားပါတယ် ..
အဆိုပါ Sensor အသစ်ဟာ iPhone 11 Pro Max ထက် အလင်းဝင်ရောက်မှုအား 87% ပိုကောင်းမှာဖြစ်လို့ ညဖက်တွေရိုက်ရင် ရှယ်ကြီးဖြစ်နေမှာပါ .. ဒီကြားထဲ Sensor ကြီးတခုလုံးကို Stabalise လုပ်ပေးတဲ့ Sensor-Shift Stabalisation နည်းပညာကြောင့် Video တွေရိုက်ကူးရာမှာ Stabalisation တော်တော်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီး Night Mode ရိုက်ရင်လဲ လက်မငြိမ်ရင်တောင် ပုံကောင်းကောင်းတွေထွက်လာမှာပါ ..
ဒါ့အပြင် Zoom ဟာလဲ 12 Pro လို 2x Zoom မဟုတ်ပဲ 2.5x Zoom ဖြစ်သွားပါတယ် .. Battery ကတော့ 3,687 mAh ပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့ Battery Life လဲတော်တော်ကောင်းမယ့် ဖုန်းတလုံးဖြစ်ပါတယ် .. ဒီတော့ iPhone 12 Pro Max ကိုဝယ်သင့်တဲ့လူတွေဟာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဝယ်သင့်တာဖြစ်ပါတယ်
Admin အနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံး2လုံးကိုရွေးရမယ်ဆိုရင် iPhone 12 နဲ့ iPhone 12 Pro Max ပဲဖြစ်ပါတယ် .. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ပိုက်ဆံရှိရင်ဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက်ပဲ iPhone 12 Pro Max သာဝယ်ချလိုက်ပါ
iPhone တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ Region ဝင်တာဝယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် .. ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာဒီပို့စ်မှာဖတ်နိုင်ပါတယ် – https://www.facebook.com/103767734345211/posts/423230195732295/
Author : Pyae Heinn Kyaw